Otu esi eme ka ihe di n'ime gi dikwa nma | Martech Zone
Aha nke ihe omuma a bu n'ezie Secretkpụrụ Nzuzo maka Ezigbo Nje Virus. M hụrụ n'anya infographic ma m na-a na-akwado nke aha… mbụ, Ekwetaghị m na e nwere usoro. Nke ọzọ, ekwetaghị m na enwere òkè zuru oke. Ekwenyere m na e nwere ọtụtụ ihe na ihe ndị na-eduga n'ịdị oke ọdịnaya. Offọdụ n'ime ya bụ ọhụụ dị larịị ka ọ na-abịa n'ihu ndị ziri ezi nwere ike ịgbasawanye iru ya. Ihe ndi ozo bu ihe ndi mmadu kesara na ihe omuma a Gryffin, ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị.
Isi ihe na-eme ka ihe dị ukwuu, nke nwere oke nkenke bụ inwe usoro ziri ezi nke ihe eji eme ihe. Ikwesiri ịrịọ mmetụta uche ziri ezi, họrọ usoro ziri ezi na ogologo, ma nwee ezigbo visuals. You maara na, n'agbanyeghị na ụdị ọdịnaya dị mkpụmkpụ na-ewu ewu n'etiti ndị na-ere ahịa ọdịnaya, isiokwu dị n'etiti okwu 3,000 na 10,000 na-enweta oke mbak?
Ihe omuma ihe omuma na-ejeghari site na mmetụta uche, cognition, nyocha, ogugu, ihe ngosi, isi okwu, ikike, ikike, oge na obilite n’onwu nke ndi okenye nke bu ihe a ma ama (atumatu anyi ji oge nile Martech Zone). Jide n'aka na ị ga-enyocha akwụkwọ ozi ọhụụ anyị kesara na Usoro 5 iji kesaa ọdịnaya gị.
Tags: nnukwu isiokwuikikecognitionmmetụta ucheonye na-ede ihe ntugharigryffinokpokorommetụtaikeokdorkquicksproutoguguresearchshareable ọdịnayana-akọrọnnweta ọdịnayaịkesa ọdịnayammekọrịta mmadụogen'efumalitere ịrịamalitere ịrịa ahịaanya
Sabrina Onyebuchi (@nkechukwuma)
Aug 13, 2015 na 11: 55 AM
Nnukwu ihe omuma ederede na usoro ntinye aka. Inwe ihe nlere dị ezigbo mkpa n’ihi na ọ bụ ihe na-adọta uche ndị mmadụ yana izipụ n’oge ha. Agaghị aba uru ma ọ bụrụ na ịnwere visuals kachasị mma mana biputere n'oge ahụ ebe enweghị ọtụtụ ọrụ. Akwa post!